उर्जा मन्त्रालय सम्हालेका दिन सम्झंदै जनार्दन शर्मा — Samyantra.com
गृहपृष्ठ » ग्यालरी, मुख्य खबर → उर्जा मन्त्रालय सम्हालेका दिन सम्झंदै जनार्दन शर्मा
उर्जा मन्त्रालय सम्हालेका दिन सम्झंदै जनार्दन शर्मा
October 20, 2017३८० पटक
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘म तिहारको केहि महिना अघि जलश्रोतको धनी देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ्ग गर्ने मन्त्रालयको मन्त्री भएँ । मन्त्रालय सम्हालेकै दिनदेखि मलाई यो पिडाबोधले पोलेको थियो । त्यसैले एक हप्ता भित्रै लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने कुरा आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो नम्बरमा नै समावेश गराएँ ।’ तिहार फूलको पर्व भाई बहिनीको मिलन अनि झिलीमिली बत्तीको उज्यालो पर्व तर उज्यालो अभावमा न फूल देखिने न भाई बहिनीको मुहारको मुस्कान भन्दै उनले उज्यालो नेपाल बनाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
साउन महिनामा समेत लोडसेडिङ्ग किन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा व्यवस्थापनमा देखिएको कुनियत सच्याउन सहि व्यक्ति पहिचान गर्न पाएकोमा उनले गर्व गरेका छन् । गएको वर्ष उज्यालो तिहार बनाउन दिएको निर्देशन कुलमानको नेतृत्वमा सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले यो वर्ष पनि त्यसले निरन्तरता पाएकोमा हर्षित रहेको बताएका छन् । यस्तो छ, उनको फेसबुक स्टाटस ।
संयोग भनौ जनताको चाहनाबस म गत तिहारको केहि महिना अगाडि क. प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा उर्जा मन्त्री भएं । जलश्रोतको धनी देशको १८ घण्टा लोडसेडिङ्ग गर्ने मन्त्रालयको मन्त्री ?
मन्त्री भएकै दिन लोडसेडिङ्गको पिडा वोध गरीरहेका जनताको छटपटी महसुस गरें । दोश्रो हप्ता प्रतिवद्धता पत्रको १ नम्बर बुँदामा राखेँ म लोडसेडिङ्गको पिडा बोध गरी रहेका जनताको पिडा मुक्त गर्न यो अध्यारो पनलाई हटाई लोडसेडिङ्गबाट मुक्त गर्ने छु । यस्तो भनाई अपत्यारीलो ? कसैले भने सस्तो लोकप्रियता, केहिले लेखे सबैले भन्दै आएको कुरा, कसैले भने दुस्साहस त कसैलाई लाग्यो फेरी नेताले जनतालाई झुक्यायो वा ढाँट्यो । आदि आदि…..
विविध प्राविधिक चुनौतिका वावजुत प्राविधिक गडबडी हुदाको केहि समय बाहेक यो तिहार सम्म १ वर्ष पुग्यो ।
बत्ति चोर्ने, बत्ति बेच्ने र दुरुपयोग गर्ने हरुको मर्ममा प्रहार गरेर लोड व्यवस्थापनको कुशलता प्रयोग गरेर राजनैतिक र जनताप्रती उत्तरदायी प्रतिवद्धताको यो उपहार हो । आर्थिक वृद्धिमा तिव्रता, अँध्याराको त्रासबाट जनताको मुक्ती, युवाहरुमा नयाँ विश्वास र आशा । देश बनाउन इमान्दार प्रयत्न, कुशल व्यवस्थापन, चुनौती खडा गर्दै सामना गर्ने प्रतिवद्धता हाम्रो ूउज्यालो नेपालूको सफलता । धन्यवाद मेरो टोलीलाई जस्ले दुस्साहसी भनिएको, सस्तो लोकप्रीयता भनिएको, झुट्ठा आस्वासनमा गनिएको सोचलाई जवाफ दियो । धन्यवाद मलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दीने मेरा आदरणीय नेता प्रचण्डलाई, धन्यवाद इमान्दार नेतृत्व गर्ने सचिव अनुपलाई, धन्यवाद कुलमानको नेतृत्वको प्राविधिक टिमलाई । धन्यवाद मलाई हौसला प्रदान गर्ने युवा साथिहरुलाई, सवै आदरणीय जनतालाई । उज्यालो नेपालको १ वर्षको सफलताको अनुभुती सगैं दिपावलीको उपलक्ष्यमा शुभ–कामना । अव समृद्धिका लागि नेपालको पानी जनताको लगानी ।